ब्रम्हाण्डको सबैभन्दा बुढो तारा पत्ता लाग्यो :: Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Audio, Video, Nepali Model, Actor, Actores, Interview
ब्रम्हाण्डको सबैभन्दा बुढो तारा पत्ता लाग्यो
खगोलविद्हरुले ब्रम्हाण्डको सबैभन्दा पूरानो तारा पत्ता लगाएका छन् । एच डी १४०२८३ नामको उक्त तारा ब्रम्हाण्डमा अहिलेसम्म पत्ता लागेका ताराहरु मध्ये सबैभन्दा बुढो रहेको र यसको उत्पत्ति १३ अर्ब २० करोड वर्ष पहिले भएको खगोलविद्हरुको भनाई छ ।
यो तारा झण्डै एक सताब्दी अघि पत्ता लागेको भएपनि ब्रम्हाण्डको सबैभन्दा पूरानो तारा भएको तथ्य भने बल्लमात्र पत्ता लागेको हो । यो तारा पृथ्वीभन्दा १८६ प्रकाश वर्ष टाढा छ ।
अमेरिकी खगोलिय समाजका खगोलविद् होवार्ड बोन्डका अनुसार यो ताराको उत्पत्ति १३.२ बिलियन वर्ष अघि भएको हो जुन अहिलेसम्म पत्ता लागेका ताराहरु मध्ये सबैभन्दा पहिलो हो । यो तारा ब्रम्हाण्डमा रहेका दोश्रो पुस्ताको तारा भएको खगोलविद्हरु बताउँछन् । पहिलो पुस्ताका ताराहरुको विलयसँगै दोश्रो पुस्ताका ताराहरुको जन्म भएको थियो । यो तारामा गह्रौँ तत्वहरु प्रसस्त मात्रामा रहेकाले यो दोश्रो पुस्ताको तारा रहेको खगोलविद्हरुको भनाइ छ । स्मरण रहोस् यसअघि मेथुसेलाह २ नामक तारलाई ब्रम्हाण्डको सबैभन्दा बुढो ताराको रुपमा लिइँदै आएको थियो ।
5 Comments on “ब्रम्हाण्डको सबैभन्दा बुढो तारा पत्ता लाग्यो”
shobhakhar wrote on 16 January, 2013, 9:40
अनुसार यो ताराको उत्पत्ति १३.२ बिलियन वर्ष अघि भएको हो जुन अहिलेसम्म पत्ता लागेका ताराहरु मध्ये सबैभन्दा पहिलो हो । यो तारा ब्रम्हाण्डमा रहेका दोश्रो पुस्ताको तारा भएको खगोलविद्हरु बताउँछन् । पहिलो पुस्ताका ताराहरुको विलयसँगै दोश्रो पुस्ताका ताराहरुको जन्म भएको थियो । यो तारामा गह्रौँ तत्वहरु प्रसस्त मात्रामा रहेकाले यो दोश्रो पुस्ताको तारा रहेको खगोलविद्हरुको भनाइ छ । स्मरण रहोस् यसअघि मेथुसेलाह २ नामक तारलाई ब्रम्हाण्डको सबैभन्दा बुढो ताराको रुपमा लिइँदै आएको थियो ।
Buy Sell Online Free In Nepal wrote on 16 January, 2013, 12:10
Like or Dislike:20[जवाफ फर्काउनुहोस्]yasoda paudel Reply: January 17th, 2013 at 9:15 amis the planet is hot or cold….. like sun or like earth????
Like or Dislike:04[जवाफ फर्काउनुहोस्]rka Reply: January 18th, 2013 at 5:17 amSathi….. Tara bhanepachi it will have it’s own light, this is notaplanet so it could be hot or cold, I suppose. This is star so is obviously hot (I think I am right)
RHS wrote on 17 January, 2013, 15:39
Tara bhane pachhi earth hunchha ta?